Man United Oo Dooneysa In Ay Lasoo Wareegto Daafaca Real Madrid Ramos
HomeHoryaalka IngiriiskaMan United oo dooneysa in ay lasoo wareegto daafaca Real Madrid Ramos
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isha la raaceyso kabtanka Real Madrid Sergio Ramos ka dib markii la isla dhexmarayay wararka ku saabsan inuu Isbaanishka ka tagayo Santiago Bernabeu.
34 jirkaan daafaca dambeedka dhexe ayaan wali heshiis cusub u saxiixin kooxda Los Blancos, sida ay hada tahayna wuxuu awoodaa inuu kala hadlo kooxaha ajaanibta ah bisha Janaayo ka hor inta uusan xagaaga si bilaash ah ugu biirin.
Tiro ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub, oo ay ku jiraan PSG, Juventus, Manchester City, iyo Bayern Munich ayaa la rumeysan yahay inay kormeeri doonaan horumarka ku xeeran mustaqbalka Spain.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Marca, kooxaha waa weyn ee Premier League, Man Utd ayaa sidoo kale xiiseeyneysa u dhaqaaqista daafaca dhiirrigelinta leh, kaasoo la rumeysan yahay inuu raadinayo heshiis labo sano ah oo uu kula joogo kooxda Zinedine Zidane.
Ramos ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u wareegayo kooxda haysata 20-jeer horyaaka Ingariiska ka hor inta uusan ugu dambeyn u saxiixin Los Blancos heshiis waqti dheer ah.
Xiddiga reer Spain ayaa ku guuleystay inuu shabaqa soo taabto 100 jeer 660 kulan oo uu u saftay Real Madrid oo ay ku jiraan 13 gool oo cajiib ah tartamada oo dhan intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2019-20.
Ramos ayaa muran la’aan ka mid ahaa daafacyadii ugu fiicnaa ebid dunida, Man Utd waxay u adeegsan kartaa qibradiisa iyo maskaxdiisa ku guuleysiga tartamaan dhammaan koobabka suurtagalka ah.